Xog: Shaki iyo cabsi ka dhalatay askarigii Badbaado Qaran ee Muqdisho lagu dilay - Caasimada Online
Home Warar Xog: Shaki iyo cabsi ka dhalatay askarigii Badbaado Qaran ee Muqdisho lagu...
Xog: Shaki iyo cabsi ka dhalatay askarigii Badbaado Qaran ee Muqdisho lagu dilay
Muqdisho (Caasimada Online) – Qaar ka mid ah ciidamadii la magac baxay Badbaado Qaran ee diidanaa muddo korarsiga iyo saraakiishii hogaamineysay ayaa wajahaya cabsi amni oo xoog leh, sida ay noo xaqiijiyeen tobaneeyo ka mid ah ciidankaas.
Cabsidaan oo maalmahaan taagneed ayaa waxay ka sii dartay maalmo kadib markii askari ka tirsanaa ciidanka Mucaaradka, islamarkaana qeyb ka ahaa hay’adda NISA la dilay kadibna lagu riday god qashin.
Marxuumka ayaa sidoo kale lala dilay qof dumar ah oo la joogtay, waxaana xog la helay ay tilmaameysaa in ay ka dambeeyeen ciidan ka tirsan dowladda. Warkaan waxaan ka soo xiganay dhinaca mucaaradka.
Saraakiisha iyo ciidamada taageeray mucaaradka ayaa qaba cabsi ah in si gaar ah loo beegsan karo islamarkaana ay soo gaartay warar cabsi gelin ah oo kaga imanaya dhinaca dowladda.
Dowladda federaalka ayaan weli ka hadal askariga sida arxan darrada ah loogu dilay Muqdisho, waxaana inta badan eedda ay farta ku fiiqeysaa in dilkaas ay ka dambeeyeen ciidankeeda.